Nge-e-pad - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ngenxa yokwanda nohlobo miniaturization yemveliso ngekhompyutha kunye izicelo bezixhobo pitch okuhle, vias uthandwa kakhulu ekubeni isisombululo esebenzayo onoxanduva uqhagamshelwano lombane phakathi imizila ngoomaleko ezahlukeneyo ibhodi wesiphaluka eprintiweyo. Vias kungenziwa ihlelwa iintlobo ezintathu eziphambili: Ngokusebenzisa-umngxuma Vias, Blind Vias kunye Vias Wangcwatywa, nganye eyenza iimpawu ezahlukeneyo kunye nemisebenzi igalelo intsebenzo iyonke ngokupheleleyo PCBs okanye iimveliso ze-elektroniki.
Nge-e-pad (VIP) technology ngeligama kubuchwepheshe ngawo nge ibekwe ngqo ngaphantsi pad ingxenye umfowunelwa, ingakumbi BGA iphedi ngeepakethe uluhlu pitch esihle. Ngamanye amazwi, ubuchwepheshe VIP ikhokelela vias ngumfanekiswana nefihlakeleyo phantsi BGA pad, efuna ukuba PCB umenzi kufuneka sivale nge ne resin phambi ekuqhubeni nesingxobo yobhedu kwi nge ukuyenza ezingabonakaliyo.
Ethelekiswa vias abangaboniyo kunye vias wangcwatywa, iteknoloji VIP features ayifanelwe ngaphezulu:
• Fit for BGAs emihle pitch
• Eziya mninzi ephakamileyo PCBs nokukhuthaza ukugcina isithuba
• Ukwenza ngcono kulawulo thermal, nenzuzo ukusasaza ubushushu
• koyisa Imiqobo eziintlobo-ngesantya esiphezulu ezifana inductance eliphantsi
• Ukwabelana umgangatho amcaba kwicandelo attachment
• Ukwenza umkhondo PCB ezincinane nomzila phambili kwaye kungcono
Ngenxa kwabo iingenelo technology VIP, nge e pad lisetyenziswa ngokuthe PCBs abasakhasayo, ingakumbi abo ezifuna indawo zibandezelekile ngenxa BGAs kwaye kugxininisa ubushushu yokudlulisa kunye noyilo-high speed. Ngoko ke, nangona iimfama / vias bamngcwaba inenzuzo zokuphucula lexinene ugcino real estate PCB, kangangoko ulawulo ubushushu ekhethiweyo-high speed abantu abachaphazelekayo, nge e pad nangoku ukhetho engcono kuwe. Xa iindleko ingqalelo, iiprojekthi ezahlukeneyo ezikhokelela iindleko ezahlukeneyo. Ngoko ke, ukuba vias inxaxheba kwiprojekthi yakho uze wena ungaphumeleli pick up uhlobo, qhagamshelana nathi nge email wonderful@wonderfulpcb.com kunye nabasebenzi bethu Sizakubonelela isisombululo kangangoko.